Kuchera Vavambisi - Ndingavei ndakachera pakutanga uye ndingaita sei kuti nditange?
Kusvetera Vatangesi | DIY zvakagadzirwa nemaoko
Kuchera pfungwa kune vanotanga
Kana iwe uri mutsva yekucheka, iwe unoda zvigadzirwa zvekutanga.
Chidziro chakanaka chokuchera - basa rakanaka
Hapana basa rakanaka rinogona kuitwa pasina zvishandiso zvakanaka. Pakunyorera, zvakakosha zvikuru kushanda zvakanyatsonaka kuitira kuti chigumisiro chekupedzisira chionekwe chakajeka. Kana pasina kushayikwa kwemafungiro nemaitiro, zvino inogona kutanga nezvinhu zvishoma zvishoma ikozvino. Chero ani zvake ari mutsva kusona anoda kuziva chidimbu chaanofanira kutenga. Kazhinji kuputika uye kugadzika kwemvura kunoshandisa tsvina yakanaka yekotoni. Nyanzvi dzinosiyana zvichienderana nezvinyorwa uye zvinhu zvehuni.
Icho chairo chakakodzera chevatangi vekutanga pakusona
Iyo tsvina haifaniri kuponeswa pane chero mamiriro ezvinhu. Simba rakakura kwazvo rekusvimha misodzi rinokosha kwete chete pakusona, asiwo panguva yekushandisa. Hapana chinonyanya kushungurudza kupfuura tsambo yakabvaruka nguva dzose mumucheka wokusona. Kazhinji izvi zvinofanira kuiswa. Izvi hazvirevi chete nguva, asiwo mitsipa uye kazhinji chido chekunyorera chakarasika. Izvozvo zvinonzi kunyorera kusvitsa hazvirevi kutanga kwevatangisa zvakanakisisa. Izvi zvinowanzogadzirwa nepolyester uye inogona kushandiswa kumativi ose. Reihgarn inonyatsokodzera kuiswa kwenguva pfupi. Iyi misodzi nekukurumidza uye inogona kubviswa nyore nyore kana gumbo rakarurama rakagadzirirwa.
Kunyangwe neyekutuka, munhu wose, kwete avo avo vatsva kugadzira, vanofanira kusarudza zvinhu zvakanaka. Nzira yakakodzera yekucheka, iyo inonyanya kushandiswa kudonha micheka, ndeyechokwadi inofanirwa. Iyo yakagadzirwa nemapanga ane mazamu akawanda, inowanzoitwa nesimbi yakaremara uye ine tarisiro yeupenyu hurefu kwenguva refu, kana isingashandisi zvisina kunaka. Pepa kana zvimwe zvinhu hazvifaniri kutemwa pamwe chete - chifukidzo chete.
Hapana mitsara kune kusarudzwa kwemashinda. Zvose zviripo. Zvinhu zvose, mavara ose - zvakajeka uye zvine mavara pamwe chete nematengo ose. Pakusarudza chinhu, hazvisi zvakakosha kuti usarudze mutengesi unyanzvi. PaIndaneti inogona kuva yakanaka kwazvo. Kune anotanga, kazhinji inokwana kuwana bhokisi rezvishongo zvezvigadzirwa. Nezvi, mutangi anogona kutanga kuedza nekuita. Kana imwe nguva seams zvakanaka, unogona kutarisira basa guru.
A Schneidematte hazvirevi kuti inofanira kuva chikamu chemishonga inokosha, asi inobatsira zvikuru, kunyanya kana zviyero zviri pairi. Kana iwe ukashanda ne-roller blade, haufaniri kuzvipa kuti udzivirire pasi.
Zvisinei, zvingave zvakakosha kugadzira tape, yakawanda yemapini ane misoro yakasiyana-siyana, kusona nendira mumasikisi akasiyana-siyana uye mashizha uye separator, kana yakagadzirwa chisina kuiswa zvakanaka kana zvipfeko zvakasimba zvakafanira kuwedzerwa.
Chero ani zvake ari mutsva yekuchera anenge atova akachengetedzeka nemidziyo iyi yekutanga uye anogona kurega kubata kwake kusimba.
Chero ani zvake asingatengi kusunungura mararamiro, asi pane sekuchivaraidza akazvitsaurira kumucheka uye nenyuchi, kazhinji anoshaya kugadzira pfungwa.
Inofanira kuva yakangwara kana inoshanda. Asi chii chokusvina? Mukana wakanaka wekufuridzirwa nekuchera pfungwa ndeyekufamba mumuguta. Kazhinji unowana zvinhu apo pfungwa inouya "Ndinogona kuita izvozvo zvakare". Kana iwewo uchinge uchinge uchinge wapfeka nguo yake, mumwe kazhinji anowana zvipfeko zvave zvisingachagoneki, asi zvakakosha kuti urege kupa.
Tsvaga pfungwa itsva dzekunyorera
Semuenzaniso, imwe yekare ye jeans inokwanisa kugadziriswa kune zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Iyo yakakwirira, saka bhanhire rine zipper nehombodo kumashure, rinogona kushandurwa zvakakwana kuva zvikwama zvechic.
Kudonha pfungwa kunowanzosvika pakunyorera pachako.
Makumbo e jeans anowanzo atova akagadzirira kumutsipa wemutsipa kana maduku maduku. Ne maitiro akanaka mazano akagadzirwa zvipo zvinogona kubuda. Zvikwama zviduku zvine chikwata - semumwe wekunyora pfungwa dzakawanda.
Zvichida pane mumwe munhu muhukama kana mudenderedzwa yevamwe vanobata nekusunungura. Izvi zvinowanzova nemaitiro akawanda uyewo zvakawanda zvezvigadziriswa zvisikwa, zvinogona kukura kuva zvinhu zvinobatsira. Nokuti vana vanogona kusikwa zvikwama zvepfu kana chic uye mafashoni makapu. Kugadzira micheka kunowanikwawo kwose kwose. Magazini yekutengeserana inopa magwaro akazvigadzira pamusika kwemakumi emakore. Magazini imwe neimwe ine muenzaniso. Semuenzaniso, kana iwe uchida kusona jira rakanaka, tsvaga muenzaniso wakadaro uye utange.
Muchengetedzo dzezvitoro - izvo, zvisinei, zvisati zvava zvisinganzwisisiki - zvinogona kutengwa micheka inounza zvakanyanya kudonha pfungwa. Kukurukurirana nevatengesi kana nechekugadzira mhepo kunounzawo pfungwa itsva dzokusona.
Ko zvakadini, semuenzaniso, nemhuka duku dzakagadzirwa ne-terrycloth, iyo inogona kutorwa mubhati. Vana vanofara zvechokwadi uye mari zhinji yakachengetedzwa. Ingozadza nehombodo uye uise pane moto kuti uome pashure pokugeza.
Mamwe makuru makuru ekucheka anowanikwawo paInternet.
Izvi ndizvo zvakagadzirwa nemablogi anongobata nyaya iyi chete.
Kusvina pfungwa mune zvakawanda. Kana iwe uchida mune imwe nyaya, iwe unongopinda hurukuro mubhurogi uye kazhinji vashanyi vanopa kunyange mapepa anotumirwa mumaminitsi mashomanana ne e-mail.
Saka iwe nokukurumidza unouya kunyorera pfungwa dzaisazoitika kwauri. Kana iwe uchida chimwe chinhu chakanyanyisa, iwe unofanira kuenda kumawebsite anowirirana. Ikoko iwe uchawana mirayiridzo uye mararamiro sezvipfeko zvekudya zvekambani kana zvigaro zvemhete uye nguo. Kudonha pfungwa nguva dzose uye kwose kwose kuwana - kungotarisa uye kuzvipira mukufungidzira nekugadzirwa.
Crochet for Beginners | Needlework DIY
Kusvina - Mucherechedzo wakarurama
Kudonhora - Ndeipi micheka yandinoshandisa?
Shandisa kenduru | DIY
Advent Calendar - DIY Krismasi
Crochet baby socks - DIY
Tinker nevana - DIY